Burmese Community Broadcasting Group(Sydney): 2013
29th Dec Radio News
Posted by - at 2:24 PM No comments:
21nd Dec Radio News
Posted by - at 10:24 PM No comments:
15th Dec Radio News
8th Dec Radio News
Posted by - at 3:33 PM No comments:
1st of Dec Radio News
Presentation of Honorary Doctorate to Daw Aung San Suu Kyi Sydney
Meeting with Burmese family at Opera House-Sydney
Posted by - at 6:55 AM No comments:
Daw Aung San Suu Kyi welcomed by Burmese Community at Sydney Airport
Warmly Message to Daw Aung San Suu Kyi
နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက် နေ့တွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီသို့ရောက်လာမည့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား သြစတြေးလျနိုင်ငံ မြန်မာမိသားစုမှ ဆစ်ဒနီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် Arrival Gate (1) တွင် သွားရောက်ကြိုဆိုမည်ဖြစ်သောကြောင့် နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက် နံနက် ၇ နာရီ ထက် နောက်မကျဘဲ လာရောက်နိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်မှာ ဦးရွှေမြင့် 0405 543 897 မြန်မာလူမျိုးစု မြန်မာ့အသံ-ဆစ်ဒနီ
24th Nov Radio News
Posted by - at 10:58 PM No comments:
17th Nov Radio News
10th Nov Radio News
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Australia ခရီးစဉ်
Dear all colleagues
Daw Aung San Suu Kyi will be visiting Australia from the 27th Nov to 2nd December 2103 as the news has confirmed yesterday.
If you wish to join in the celebrations, there will be2public events in Sydney on the 27th Nov Wednesday, both at the Opera House.
The Main Event started at 5pm where she will be conferred Doctorates from the University of Sydney and UTS.
We will need to buy tickets for this event if we wish to participate.
There will beaspecial PRE SALE day for the Burmese to buy tickets to this event ie TOMORROW Thursday from 9am to Friday 9am.
The price is about 25-30 dollars.
If one misses to get ticket tomorrow, can still try and get them when they are on sale to the public.
THE LINK for this special PRE SALE - will be made available to us only on Wednesday (ie today) evening. I will send to all as soon as I receive it. Please check your mails tonight.
The other event where DASSK will meet the Burmese community will be at 3pm - 4pm.
It will be at the Opera House concert Hall where she will speak in Burmese.
There is no charge to the event. Opera House will accommodate us for free, 1500 persons.
How these tickets will be made available to all of us, I will update.
Children over 12 yr old can participate. Chidren between 10 to 12, if the parents would make sure that the child will not make noises and disturbs the crowd are allowed to attend.
On the 17th November 2013, SUNDAY 6pm onwards, there will beafundraising concert event at the Granville Town Hall where all proceeds will go to the Health and Education projects of DASSK. I understand that most of the free tickets to the Opera House for the Burmese community will be available from there.
Please email me If there is any queries.
Posted by - at 4:30 PM No comments:
ရေဒီယိုအစီအစဉ် ၁။ ရေဒီယိုအိမ်-ဦးပန်တျာ ၂။ သတင်း၊သီချင်း၊ကြော်ငြာ ၃။ ခင်မောင်တိုးနှစ်ပတ်လည်အလွမ်းပြေနဲ့ နောက်ဆုံးတေး "သမုဒယကျောင်း" ၄။ မောင်စွမ်းရည်ရဲ့  နာသုံးနာ ဆရာ - ဆောင်းပါး(မိုးမခ) ၅။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဆစ်ဒနီမြို့ မှ ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုရေးသတင်း ကြော်ငြာရဲ့  ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာ မြင့်ချိုသို့  မေးမြန်းခြင်း ၆။ ဗကပ စည်းရုံးရေးကော်မီတီမှ ပေးပို့သော ABSDF ငွေရတုဂုဏ်ပြုလွှာ ၇။ ABSDF ငွေရတုအတွင်း သမိုင်းပုံရိပ်တချို့ - ထက်အောင်ကျော် JACDB ၈။ လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင် လစဉ်ချီးမြှင့်ငွေ မြန်မာကျပ်ငွေ ၃၇၅ ကျပ်-DVB ၉။ ဇနီး ၄ ယောက်ပုံပြင်-ကွန်ပြူတာဦးအောင်ဇော် အထူးကဏ္ဍ-ဗကပ စည်းရုံးရေးအစီအရင်ခံစာမှ (၁) တိုင်းရင်းသားများအပေါ် လစ်လျှူထားတဲ့အစိုးရ (၂) အာဏာပြဿနာ-ချိန်ခွင်လျှာ စီစဉ်သူ-ဦးပန်တျာ-ဦးသုတ-ဒေါက်တာဇင်မာထွန်း-မေရီ သတင်း/ကြော်ငြာတာဝန်ခံ နှင်းမြတ်ခိုင်
27th Oct Radio News
20th Oct Radio News
Posted by - at 4:39 PM No comments:
13 10 13 Radio News
6th Oct Radio News
29th Sept Radio News
Posted by - at 2:44 PM No comments:
22th Sept Radio News
Recorded by BCBG Team
The video clip was recorded in the FM 98.5 Station while we were broadcasting
on the air as Burmese program.
15th Sept Radio News
88 Generation and the spirit of student activism?
8th Sept Radio News
1st September Radio News
25th August Radio News
18th August Radio News
11th Augst 2013 Radio News
4th August Radio News
Posted by - at 8:55 PM No comments:
28th July Radio News
21th July Radio News
Sydney Burmese Radio 21th July 2013
Producer: Hnin Myat Khine
Programs: weekly news, interview with Mr Than Lwin (FTUM) life, interview with David Than Aung, Interview with Win Khine Htay
Posted by - at 6:31 PM No comments:
14th July Radio News
Posted by - at 3:24 PM No comments:
7th July Radio News
Burmese Radio BCBG, 7th July 2013 Radio News
Weekly Burmese News, Community News/ Music/ The current affair/ 7th July Affair
Posted by - at 12:41 AM No comments:
30th June Radio News
Burmese Radio BCBG, 30th June 2013 Radio News
Produced by U Thu Ta
Burmese News/ Music/ Community News & Local News/ Burmese 30 Comrades article, Daw Aung San Su Kyi's speech(last independence day event) etc....
23th June Radio News
16th June Radio News
Burmese Radio BCBG, 16th June 2013 Radio News
Arranged by Producer Hnin Myat Khine
Burmese News/music/the current affairs/interviewed with Ma Thida
9th June Radio News
Burmese Radio BCBG, 9th June 2013 Radio News
Burmese News/music/the current affairs
2nd June Radio News
Burmese Radio BCBG, 2nd June 2013 Radio News
Arranged by Producer Ni Ni Soe
Posted by - at 4:51 PM No comments:
26th May Radio News
Burmese Radio BCBG, 26th May 2013 Radio News
Arranged by the Producer U Shwe Myint
Weekly Burmese and world news/ Musics/ the facts on Drum
19th May Radio News
Burmese Radio BCBG, 19th May 2013 Radio News Arranged by the Producer Hnin Myat Khine Weekly Burmese/ Music/ an Article/the Current Affair Sydney-Australia May@BCBG
12th May Radio News
၃၊ သတင်း၊ သီချင်းကြော်ငြာ
၄၊ အမေ့အိမ်လွမ်းတဲ့ မောင်လေးနဲ့မြန်မာဥပဒေရေးရာ
၅၊ ဗမာပြည်က ကင်ဆာရောင်ခြည်စက် The Voice ဂျာနယ်
၆၊ ၀င်းဦးရဲ့ အနုပညာ
၇၊ ဇာဂနာရဲ့  ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာ(ကျောက်မြောက်စာပေဟောပြောပွဲ-ဒီဇင်ဘာ 2012)
၈၊ သမိုင်းဘီးနဲ့ ဘုန်းကြီးပုံပြင်-စိုးမင်း JACDB
၉၊ ကျော်သူရဲ့ဧရာဝတီကျိန်စာ(ဆစ်ဒနီမြို့  လူထုတွေ့ဆုံပွဲ 4-5-2013)
၁-နာရေးလူမှုရန်ကုန်အတွင်းရေးမှူး ရွှေဇီးကွက်- ကိုယ်ရေးအထုပ္ပတိ(ကြူတီစံ)
၂၊ ရွှေဇီးကွက်အဖွင့်စကား(ဆစ်ဒနီမြို့  လူထုတွေ့ ဆုံပွဲ 4-5-2013)
ဦးပန်တျာ-DR သိင်္ဂီဦး၊ DR လေးသဇင်နွယ်
5th May Radio News
Burmese Radio BCBG, 5th May 2013 Radio News Arranged by the Producer Ko Myint Oo Weekly Burmese/ Music/ Interviewed with Kyaw Thu and his wife Sydney-Australia May2013@BCBG
28th April Radio News
Arranged by the Producer Nyi Nyi Soe
Weekly Burmese/ Music/ an Article/the Current Affair
21th April Radio News
သီတဂူဆရာတော်၏ ကောင်းတဲ့ဘက်တွင် ထူးချွန်ကြပါစို့
၁၃၁ နှစ် မွေးနေ့ ဦးဖိုးစိန်၏ အနုပညာအကြောင်း
ကိုညီညီစိုး၊ စိန္ဒာဏိ၊ နှင်းမြတ်ခိုင်၊ တောပြဇတ်မင်းသား၊ ဦးအောင်ကြည်
14th April Radio News
၁။ သင်္ကြန်သမိုင်းပြောသူ ရန်အောင် နဲ့ မေသန်းနု ဖျော်ဖြေမှု ၂။ သတင်း/သီချင်း
၃။ ဆစ်ဒနီမြို့တွင် သူရရွှေမန်းနှင့် မြန်မာအဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံမှုမှတ်တမ်း(29-03-13 JACDB)
၄။ ၁၃၇၅- မြန်မာကြယ် ဒီမိုကရေစီခေတ်ပြောင်းသင်္ကြန်စာ(ကွန်ပြူတာ ဦးအောင်ဇော်)
၅။ နာရေးကူညီမှု ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်နဲ့ မြန်မာ့အသံဥက္ကဌ တွေ့ဆုံပွဲ-ဆစ်ဒနီမြို့
၆။ ၂၀၁၃ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဖျော်ဖြေသော မင်္ဂလာဒိုးသံချပ်
၈။ အူအသစ်နဲ့ လူပြန်ဖြစ်တဲ့ကဗျာ-ဦးပန်တျာ
၁။ မြ၀တီ ဦးရဲဂေါင်(၈၉) တလပြည့်အလွမ်းပြေ (သူ့ထက်ကဲ ဟာသပြဇတ်-မြ၀တီ ဦးရဲဂေါင်-ဆင်ပေါင်ဝဲ ဦးအုန်းခိုင်-ဂန္တ၀င်စာဆိုရှင် မာမာအေးနဲ့ ဂျပန်မ မယုရီ ၂၀၀၃ ခုနှစ်)
၂။ မြန်မာ့ဂီတ ဗျောအလှရှာပုံတော်
ဦးပန်တျာ၊ နှင်းမြတ်ခိုင်၊ ဒေါက်တာ ဇင်မာထွန်း
7th April Radio News
Arranged by the Producer Ko Myint Oo
The New Year speech by Daw Aung San Suu Kyi, Weekly Burmese/ Music/ interviews
31th March Radio News
Arranged by the Producer Hnin Myat Khine
Weekly Burmese/ Music/ the Easter/ talking about the SmartPhone/ the greeting from Cho Pyone, Banya Han and Okka who just visiting in Sydney/aWoman section/apoem and interview with Sanndy Htay Aung
Posted by - at 2:35 PM No comments:
24th March Radio News
Posted by - at 5:59 PM No comments:
17th March Radio News
သတင်း/ ကြော်ငြာ/ ဦးရဲခေါင်အတွက် လက်ဆောင်စကား/ ကြုံရာဆုံရာ စကားဝိုင်း
Posted by - at 7:29 AM No comments:
10th March Radio News
၁။ အကြီးမြတ်ဆုံးဂုဏ်-ရီရီသန့်၊ ရဲနိုင်လင်းဆိုင်း(ဒု-အကြိမ် လွတ်လပ်ခြင်း ရုပ်ရှင်ဂီတပွဲတော်၊ မြန်မာ့ဂီတပဌမဆုရတေး ၃၁-၁-၁၃) ၂။ သတင်း/သီချင်း ကြော်ငြာ ၃။ မြောက်ဥက္ကလာကမိသားစု Hip Hop ၄။ အရှိုင်း(၀ီလီယံဖမ်း)ရဲ့ တော်လှန်ရေးတေးစီးရီးမိတ်ဆက် ၅။ မြန်မာပြည်ယနေ့မျက်မှောက်နိုင်ငံရေး(ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း) ၆။ မတည့်သောအစားအစာကို သင့်လျော်အောင်စားသောက်နည်း(ကွန်ပြူတာဦးအောင်ဇော်) ၇။ ကမ္ဘာတလွှားသတင်းစကား(နှင်းမြတ်ခိုင်) ၈။ ရှင်မွှေးလွန်းနဲ့ ကိုမျိုးအောင် ငါတို့ပြည်ထောင်မှာ ဘယ်သူလဲ(ဦးဘုန်းဓါတု) ၉။ လူရွှင်တော် မော့စ် အလွမ်းပြေ နှစ်ပါးခွင်
၁၀။ မော်ကွန်းဝင် ပထမ မြ၀တီ ခေတ်ပြိုင်အယ်ဒီတာဟောင်း မြ၀တီရဲခေါင် အသက် ၈၉ အလွမ်းပြေ
အနောက်နန်းမတော်မမြလေး(ချစ်သမျှကို) လှိူင်ထိပ်ခေါင်တင်(စိန်ခြူးကြာညောင်)တို့ဘ၀ သရုပ်ဖေါ်တေးများ-ကျော့မှူး-ထရမ်းပက် ၀င်းဦး-မိုးဇော်ဗိုလ်နဲ့ ခင်ညွန့်ရီ
စီစဉ်သူများ ဦးပန်တျာ, နှင်းမြတ်ခိုင်, Dr ဇင်မာထွန်း
Posted by - at 3:52 PM No comments:
3rd March Radio News
Arranged by the Producer Hnin Myat Khaine
Weekly Burmese/Australia News, Communities news andashort opera
၂၄ ရက် ဖေဖေါ်ဝါရီ ရေဒီယိုသတင်း
၁၇ ရက် ဖေဖေါ်ဝါရီ ရေဒီယိုသတင်း
Song for 20th Anniversary of BCBG
၁၀ ရက် ဖေဖေါ်ဝါရီ ရေဒီယိုသတင်း ၂
၁၀ ရက် ဖေဖေါ်ဝါရီ ရေဒီယိုသတင်း ၁
၃ ရက် ဖေဖေါ်ဝါရီ ရေဒီယိုသတင်း
၁။ နှစ် ၂၀- မြန်မာ့အသံတေးသစ်ပန်ဆုလွှာ-ဦးပန်တျာ
၅။ ဟာသအကယ်ဒမီညီနောင် မိုးဒိ-မောတို့ရဲ့  သာသရေးပြတ်လုံး
၆။ ဆစ်ဒနီမြို့ -ခင်မောင်တိုးအမှတ်တရနဲ့ ခေတ်ပေါ်တီးဝိုင်းသစ် Dream Planet မိတ်ဆက်ပွဲ [ Dr ကျော်မြင့် မိတ်ဆက်စကားနဲ့ ကိုမင်းဦးကဗျာ]
၇။ ထေရဗုဒ္ဓဘာသာ၊ မွန်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျန်စစ်သားနဲ့ မဏိစန္ဒာ
၉။ မဟာဂီတဦးပြုံးချို-အထုပ္ပတ္တိ၊ တေးဘုမ္မာ ဆိုတဲ့- ဂျပန်သူ Yuritakahashi
၁၀။ အမှိုက်ပုံးနဲ့တူတဲ့စိတ်-ကွန်ပျူတာ ဦးအောင်ဇော် အထူးကဏ္ဍ-ဖခင်နှဲဆရာကြီး ဦးစိန်ဗလ သို့ နှစ် (၃၀)အလွမ်းနဲ့ မိခင်ကြီး ဖက်ရှင်မယ် မြသန်းရင်-ညီဝင်းစ်ိန်တို့ရဲ့  ရှင်မွေးလွန်း မင်းနန္ဒာ-ဇာတ်-[ဦးပန်တျာ-တင်ပြသည်]
၂၇ ရက် ဇန်န၀ါရီ ရေဒီယိုသတင်း
၂၀ ရက် ဇန်န၀ါရီ ရေဒီယိုသတင်း
၁၃ ရက် ဇန်န၀ါရီ ရေဒီယိုသတင်း
၆ ရက် ဇန်န၀ါရီ ရေဒီယိုသတင်း
On September 18, 1992, the Burmese Community Broadcasting Group was formed with representatives of7community organisations and individuals in Sydney, Australia.
The BCBG, we broadcast on the FM 98.5 on every Sunday from 1 pm. to2pm..
Presentation of Honorary Doctorate to Daw Aung San...
Daw Aung San Suu Kyi welcomed by Burmese Community...
မြန်မာလူမျိုးစု မြန်မာ့အသံ © All rights reserved.. Watermark theme. Powered by Blogger.